कपाल कैंचीका लागि स्क्रूका प्रकारहरू: गलत छनौट नगर्नुहोस्! - जापान कैंची
यदि तपाइँ हेयरस्टाइलिस्ट हुनुहुन्छ भने, तपाइँलाई थाहा छ कि तपाइँको कैंची राम्रो अवस्थामा राख्नु महत्त्वपूर्ण छ। कैंचीको अत्यावश्यक भागहरू मध्ये एक तनाव प्रणाली हो, जसले कपाल काट्दा ब्लेडको नियन्त्रण र कसलाई कायम राख्छ।
स्क्रू तनाव प्रणालीको एक भाग हो र ब्लेडहरू बीचको कडापन समायोजन गर्न प्रयोग गरिन्छ किनभने तिनीहरू समयको साथ ढीला हुन्छन्।
त्यहाँ तीन मुख्य प्रकारका स्क्रू र तनाव प्रणालीहरू छन्: नियमित स्क्रू, थम्ब स्क्रू, र यूएफओ स्क्रू।
यस लेखले प्रत्येक प्रकारको पेंचको बारेमा छलफल गर्नेछ र तपाइँलाई तपाइँको कपाल कैंचीको लागि कुन एक उत्तम छ भनेर निर्णय गर्न मद्दत गर्दछ!
यहाँ केहि अन्य समान लेखहरू छन् जुन तपाईंलाई रुचि हुन सक्छ:
उत्तम तनावको लागि तपाइँको कपाल कैंची कसरी पुन: व्यवस्थित गर्ने
हेयरड्रेसिंग क्यान्सरहरूको लागि पूर्ण गाईड
पेशेवरहरूको लागि उत्तम कपाल काट्ने कैंची
सर्वश्रेष्ठ कपाल कैंची किटहरू
कसरी आफ्नो कपाल कैंची तिखार्न
कपाल कैंचीको लागि स्क्रूहरू किन महत्त्वपूर्ण छन्?
स्क्रूहरू कपाल कैंचीका लागि महत्त्वपूर्ण छन् किनभने तिनीहरूले ब्लेडहरू बीचको तनाव कायम राख्न मद्दत गर्छन्। यदि स्क्रूहरू ढीला छन् भने, ब्लेडहरू ढीलो हुनेछन् र साथै काटिने छैनन्। तपाईंको कैंचीले सही तरिकाले काम गर्न सकून् भनेर पेंचहरूलाई बलियो बनाउनु महत्त्वपूर्ण छ।
कपाल कातरहरूको लागि विभिन्न प्रकारका स्क्रूहरू
हामी तल प्रत्येक प्रकारको विस्तृत रूपमा छलफल गर्नेछौं।
नियमित स्क्रू: कपाल कैंचीको लागि सबैभन्दा सामान्य प्रकार
नियमित स्क्रूहरू पेचको सबैभन्दा सामान्य प्रकार हुन्, र तिनीहरू प्रयोग गर्न सरल छन् र मानक पेचकस वा तनाव कुञ्जीसँग समायोजन गर्न सकिन्छ। यद्यपि, तिनीहरूलाई बलियो बनाउन र ढिलो गर्न गाह्रो हुन सक्छ, यसले ब्लेडहरूमा सही तनाव प्राप्त गर्न गाह्रो बनाउँछ।
नियमित कैंची पेंच को मुख्य विशेषताहरु:
नियमित स्क्रू सामान्यतया एक स्लटेड टाउको सुविधा।
पेंचको शाफ्ट छोटो छ। यसले पेंच बनाउँछ तनाव राम्रोसँग राख्नुहोस् फराकिलो खोलेर।
सजिलै संग समायोजित एक तनाव कुञ्जी वा समान फ्लैट किनारा उपकरण संग।
केही सुविधाहरू र नियमित पेंचहरूको क्षमता भिन्न हुन्छ, तर तिनीहरू सामान्यतया माथिका अधिकांश समावेश गर्दछ।
नियमित पेंच समायोजन गर्ने तरिकाहरू:
जब नियमित कपाल स्क्रू ढीलो हुन्छ, थोरै कस्नुहोस् र खोल्ने र बन्द गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। यो प्रक्रिया दोहोर्याउनुहोस्, बिस्तारै बिस्तारै, जब सम्म तपाईं कैंची तनाव संग सन्तुष्ट हुनुहुन्न।
यदि तनाव सुधार भएको छैन भने, तपाईले ह्यान्डलहरूलाई थोरै सार्नको लागि तनाव प्रणालीमा धुने मेसिनलाई स्थानमा सार्न सक्नुहुन्छ। यो प्रक्रिया दोहोर्याउनुहोस्, बिस्तारै बिस्तारै, जब सम्म तपाईं कैंची तनाव संग सन्तुष्ट हुनुहुन्न।
तपाईं सन्तुष्ट भएपछि, परीक्षण प्रयास गर्नुहोस् कपाल काट्ने वा केही चोटि ब्लेडहरू खोल्नुहोस् र बन्द गर्नुहोस् कि तनाव हो कि भनेर हेर्न। यदि तपाइँ फेला पार्नुभयो कि यो प्रत्येक खुल्ला गति संग ढीलो हुन्छ, तपाइँ एक समस्या हुन सक्छ।
यदि तनाव रहन्छ भने, तपाइँ आश्वस्त हुन सक्नुहुन्छ कि तपाइँको नियमित स्क्रू कडा छ, तनाव प्रणाली राम्रोसँग समायोजित छ, र तपाइँ कपाल काट्न तयार हुनुहुन्छ!
सावधानी: नियमित स्क्रूलाई कडा पार्नबाट जोगिनुहोस् किनकि यसले स्क्रू वा तनाव प्रणालीमा समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ। यदि तपाईंले तिनीहरूलाई अधिक-कसाउनुभयो र तिनीहरू स्थायी रूपमा ढीलो भएको फेला पार्नुभयो भने, तपाईंले स्क्रू वा तनाव प्रणालीलाई बदल्नको लागि एक तीखा सेवालाई परामर्श गर्नुपर्नेछ।
थम्ब स्क्रू: कस्न र ढिलो गर्न सजिलो
थम्बस्क्रूहरू नियमित स्क्रूजस्तै हुन्छन्, तर तिनीहरूमा थम्ब स्क्रू ड्राइभर बनाइएको हुन्छ। यसले स्क्रूहरूलाई कस्न र ढिलो गर्न सजिलो बनाउँछ, जसले तनावलाई सही रूपमा प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
औंठा कैंची पेंच को मुख्य विशेषताहरु:
सजिलो पृथक सफा र सर्भिसिङका लागि शार्पनर वा हेयरड्रेसरहरूलाई पनि तिनीहरूलाई अलग गर्न अनुमति दिन्छ।
सजाइएको पेंच जुन कैंचीबाट टाँसिन्छ र सामान्यतया कपालको कातरको रूपलाई पूरक बनाउने डिजाइन फिचर गर्दछ।
कसर र तनाव राख्छ धेरै अन्य स्क्रू भन्दा राम्रो।
थम्बस्क्रू समायोजन गर्न अत्यन्तै सजिलो छ, र तपाइँ कुनै पनि उपकरण बिना हातले तनाव व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं कपाल कैंचीमा थम्बस्क्रूको तनाव समायोजन गर्न सक्नुहुन्छ:
आफ्नो हात प्रयोग गरेर, थम्ब्सस्क्रूलाई दायाँ (घडीको दिशामा) कस्नको लागि घुमाउनुहोस्।
आफ्नो हात प्रयोग गरेर, थम्ब्सस्क्रूलाई बाँया (घडीको विपरीत दिशामा) खुकुलो पार्न घुमाउनुहोस्।
बिस्तारै बिस्तारै समायोजन गर्ने प्रयास गर्नुहोस्, त्यसपछि ब्लेडहरू खोलेर र बन्द गरेर थम्बस्क्रूको तनाव परीक्षण गर्नुहोस्। तनाव संग सन्तुष्ट हुँदा, तपाईं कपाल काट्न सुरु गर्न तयार हुनुहुन्छ!
थम्बस्क्रूहरू कपालका स्टाइलिस्टहरू, हेयरड्रेसरहरू र नाईहरूका लागि सधैं सबैभन्दा लोकप्रिय नहुन सक्छ। कपाल काट्ने प्रविधिहरू। तर कुनै पनि उपकरण बिना तनाव व्यवस्थापन गर्न को लागी यो सबै भन्दा लोकप्रिय प्रकारहरु मध्ये एक बनाएको छ।
UFO स्क्रू: सूक्ष्म र लुकेको स्क्रू जुन छेडछाड प्रमाण पनि हो
UFO स्क्रू, जसलाई "टेम्पर प्रुफ पिभोट स्क्रू" पनि भनिन्छ, आधुनिक प्रकारका पेचहरू हुन् र तिनीहरूलाई अन्य स्क्रूहरूबाट अलग गर्ने अद्वितीय डिजाइन प्रदान गर्दछ।
UFO स्क्रू लुकेको, वा भित्री, स्क्रू हो जुन थम्ब स्क्रू र नियमित स्क्रूजस्ता ब्लेडहरूबाट बाहिर निस्कदैन। यसले यसलाई कम ध्यान दिने बनाउँछ र कपाललाई पेंचमा समात्नबाट रोक्छ।
UFO पेंच को मुख्य विशेषताहरु:
लुकेको, वा आन्तरिक, स्क्रू जुन थम्ब स्क्रू र नियमित पेचहरू जस्तै ब्लेडबाट बाहिर ननिस्कन्छ।
यसले यसलाई कम ध्यान दिने बनाउँछ र कपाललाई पेंचमा समात्नबाट रोक्छ। फोहोर र बिल्डअप पेंचमा जान सक्दैन, जसले तपाइँको कपाल कातरेको जीवनलाई लामो बनाउँछ।
यसले एक अद्वितीय डिजाइन प्रदान गर्दछ जसले यसलाई अन्य स्क्रूहरूबाट अलग गर्दछ - एउटा पेशेवर कपाल कैंचीको लागि सबैभन्दा फैशनेबल प्रकारका पेंचहरू।
UFO स्क्रूहरू समायोजन गर्न सजिलो छैन, र तपाईंलाई कपाल कैंचीको पछाडिको दुई-टुक्रा UFO स्क्रूको समतल भाग परिमार्जन गर्न विशेष उपकरणहरू चाहिन्छ।
UFO स्क्रूहरू काँतरको पछाडिबाट समायोज्य छन्। तपाईंले खरिद गर्नुभएको कपाल कैंचीको साथ आउने तनाव समायोजन उपकरण प्रयोग गरेर, तपाईंले तनावलाई बलियो बनाउन दुई-टुक्रा पेंचलाई ट्विस्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
कस्नको लागि स्क्रूलाई दायाँ घुमाउनुहोस्। यो बिस्तारै बिस्तारै गर्नुहोस्, र प्रत्येक सानो तनाव समायोजनको साथ, तपाईंले ब्लेडहरू खोलेर र बन्द गरेर शियरहरूको तनाव परीक्षण गर्नुपर्छ।
आफ्नो हात प्रयोग गरेर, स्क्रूलाई बायाँ घुमाउनुहोस् (घडीको विपरीत दिशामा) खुकुलो बनाउन। माथिको जस्तै समान प्रक्रिया पछ्याउनुहोस्, अलि-अलि समायोजन गर्नुहोस् र सन्तुष्ट नभएसम्म ब्लेडहरू खोलेर र बन्द गरेर प्रत्येक समायोजनको परीक्षण गर्नुहोस्।
बिस्तारै समायोजन गर्ने प्रयास गर्नुहोस्, त्यसपछि ब्लेडहरू खोलेर र बन्द गरेर UFO स्क्रूको तनाव परीक्षण गर्नुहोस्। तनाव संग सन्तुष्ट हुँदा, तपाईं कपाल काट्न सुरु गर्न तयार हुनुहुन्छ!
UFO स्क्रूहरूले एक अद्वितीय, सूक्ष्म र छेडछाड-प्रूफ डिजाइन प्रदान गर्दछ जुन कपाल स्टाइलिस्टहरू, कपालहरू र नाईहरू बीच लोकप्रिय हुँदै गइरहेको छ। यदि तपाइँ तपाइँको कपाल कैंची को लागी एक नयाँ स्क्रू तनाव प्रणाली को लागी खोज्दै हुनुहुन्छ, तब UFO स्क्रू तपाइँको लागि सही छनौट हुन सक्छ!
यो पेंच मा समस्या निवारण सजिलो छ। पहिले, तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ कि टाउकोको छेउ जोडिएको छ, र मैले प्रायः तिनीहरूलाई रिभर्समा राखेको देखेको छु। त्यसपछि, वाशरहरूको मात्रा र स्थितिमा ध्यान दिनुहोस्। तपाईं तिनीहरूलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्षम हुनुहुन्न भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न आन्तरिक क्लिकर प्लेटहरू बारे सचेत रहनुहोस् (पहिलेको लेख हेर्नुहोस्)। पेंच पर्याप्त कडा नहुने बेला वाशर थप्दा उपयोगी हुन्छ भन्ने मैले फेला पारेको छु।
सारांश: कपाल कैंची स्क्रू को सबै भन्दा राम्रो विकल्प के हो?
कपाल कैंचीका लागि तीनवटा मुख्य पेच र तनाव प्रणालीहरू छन्: नियमित स्क्रू, थम्बस्क्रू र यूएफओ स्क्रू। प्रत्येकसँग यसको अनौंठो फाइदाहरू र कमजोरीहरू छन् जुन खरीद गर्नु अघि विचार गर्नुपर्छ।
थम्बस्क्रूहरू समायोजन गर्न सजिलो छ र हेयरस्टाइलिस्टहरू, हेयरड्रेसरहरू र नाईहरू बीच सबैभन्दा लोकप्रिय छन्। तिनीहरूले फैलिएको स्क्रू प्रस्ताव गर्छन् जसले तपाईंको हातले ब्लेडलाई कस्न वा खुकुलो बनाउन सजिलो बनाउँछ। जे होस्, यो केहि कपाल काट्ने प्रविधिको समयमा बाटोमा पुग्न सक्छ।
नियमित स्क्रूलाई समायोजन गर्न कुनै उपकरणको आवश्यकता पर्दैन र थम्बस्क्रू भन्दा बढी सूक्ष्म विकल्प हो। तिनीहरूले स्क्रू जस्तै थम्ब स्क्रूमा कपाललाई समात्नबाट पनि रोक्छन्। यद्यपि, यदि तपाईंसँग सही उपकरणहरू छैनन् भने तिनीहरू समायोजन गर्न गाह्रो हुन सक्छ।
UFO स्क्रू एक आधुनिक प्रकारको स्क्रू हो जसले एक अद्वितीय डिजाइन प्रदान गर्दछ जसले तिनीहरूलाई अन्य स्क्रूहरूबाट अलग गर्दछ। तिनीहरू लुकेका, वा आन्तरिक, स्क्रूहरू हुन् जुन थम्ब स्क्रू र नियमित स्क्रूहरू जस्तै ब्लेडबाट बाहिर निस्कदैन। यसले तिनीहरूलाई कम ध्यान दिने बनाउँछ र कपाललाई पेंचमा समात्नबाट रोक्छ। UFO स्क्रूहरू काँतरको पछाडिबाट समायोज्य हुन्छन्, र तपाईंले खरिद गर्नुभएको कपाल कैंचीसँग आउने तनाव समायोजन उपकरण प्रयोग गरेर, तपाईंले सही तनाव प्राप्त गर्न स्क्रूलाई कस्न वा खुकुलो पार्न सक्नुहुन्छ।
यो पेंच मा समस्या निवारण सजिलो छ। पहिले, यो टाउकोको कुन पक्ष (बायाँ वा दायाँ) मा जोडिएको छ भनेर सचेत हुनुहोस्। दोस्रो, वाशरहरूको मात्रा र स्थितिमा ध्यान दिनुहोस्। तेस्रो, आन्तरिक क्लिकर प्लेटहरू बारे सचेत रहनुहोस् (पहिलेको लेख हेर्नुहोस्) कि तपाईंले तिनीहरूलाई प्रतिस्थापन गर्नुहुन्न।
प्रत्येक प्रकारको स्क्रूको आफ्नै अनौंठो फाइदाहरू र कमिहरू छन् जुन खरीद गर्नु अघि विचार गर्नुपर्छ। पढ्नु भएकोमा धन्यवाद!